Isitolo esidayisa yonke impahla esetshenziswayo esetshenziswa nsuku zonke esetshenziswayo ukubulala amagciwane kanye nokusula ama-antibacterial Umhlinzeki noMenzi | Kungcono
Isisusi sokubumba siyasula
Izicathulo zisulwa ngamanzi
Futha i-sanitizer yesandla
Isihlanza ngesandla seGel
Ifektri ikhwalithi ephezulu engu-80 ibalwa ubuso obuningi ...
70% Utshwala Instant elwa namagciwane Gel Hand Sanitizer ...
Encane futhi ephathekayo ukusetshenziswa kwansuku magciwane kanye antiba ...
Ukusula okumanzi kuqukethe uvithamini E no-C bengezela ebusweni ...
Ngokwezifiso okubolayo okubolayo yizingane usula zasendlini Ayikho f ...
Factory wholesale ulamula ukunambitheka magciwane siqu ...
Yemvelo hypoallergenic ephephile friendly 200 ibala isilwane ...
Factory wholesale boxed 100 ukubalwa yokuhlanza isilwane bact ...
Factory OEM umthamo omkhulu 750 ubala okuningiliziwe c ...
Kwehla ngempumelelo amabhaktheriya angama-75% Utshwala magciwane ...
Ubuhle obumsulwa umnwe bamboo makeup khipha i-cleanin ...
Ukuhlanza nokumanzisa i-spascriptions eyenziwe yasebenza ...
Izimonyo ezomileyo ezomileyo zesikhumba ...
Ama-72 asula iphunga lasekhaya Amafutha wezingane ahlanzekile
Kubulala ama-99% wamagciwane ayingozi okusula ama-antibacterial
Umkhiqizo owenziwe ngokwezifiso ama-wipes angu-160 ngebhokisana ngalinye elingu-75% alcoho ...
I-KN95 Mask Yokuvikela
Factory ngezifiso 75% Utshwala Instant Antibacteri ...
Ukusetshenziswa okuncane nokuphathekayo kwansuku zonke kwe-disinfection nama-antibacterial wipes
Ukusula amagciwane kungabulala ngempumelelo amagciwane angama-99.9%. Imvubelo yetiye yemvelo eluhlaza inomphumela okhethekile ekubambezelekeni kokuguga. Akulimazi izandla noma isikhumba. Iphakethe elincane, okulula ukuliphatha.
* Amapharamitha womkhiqizo
Igama lomkhiqizo: 75% Utshwala busula
Inombolo imodeli: QMSJ-304
Izithako ezisebenzayo: isibulala-magciwane, uNov-woven, Ro-water
Izithako ezingasebenzi: Amanzi, i-Aloe Vera, Iphunga leCitrus
Usayizi: 14 * 18cm
Isisindo (i-Gramme / Square Meter): 40gsm
Izingcezu ngekani ngalinye: Ukubalwa okungu-750
Ukusetshenziswa Okucacile: Antibacterial, disinfection sanitizing nokuhlanza.
MOQ: Amathini ayi-1000
Isitifiketi: I-CE, i-FDA, i-EPA, i-MSDS
Impilo: iminyaka engu-2
Imininingwane yokupakisha： Amathini ayi-8 / ibhokisi
I-OEM ne-ODM: Yamukela
Isikhathi sokukhokha: L / C.、D / A、I-D / P.、I-T / T.、i-Western Union
Imbobo: IShanghai, iNingbo
Ama-antiseptic wipes angahlanza ngokushesha amabhaktheriya ebusweni futhi alungele ukuhlanzwa kwendle. Ama-wipe elwa namagciwane awangezelwa kuphela uketshezi lwe-disinfectant olungabulala ngempumelelo ama-99.9% amabhaktheriya, kufaka phakathi i-Escherichia coli, iSalmonella, i-rotavirus kanye ne-90% yama-allergen. Futhi sifake netiye yemvelo eluhlaza. Izakhi zemvelo ezisetiyeni eliluhlaza zinemiphumela ekhethekile ekulweni nokuguga, ukulwa nomdlavuza, ukulwa nomdlavuza, inzalo, nokulwa nokuvuvukala. Futhi itiye eliluhlaza lisiza ukubambezela ukuguga. Ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi isibulala-magciwane sizolimaza isikhumba sakho. Lokhu ukusula amagciwane okungeke kulimaze isikhumba. Akukho ukungcola nephunga elilula letiyi eluhlaza.
Ama-wipe okukhipha amagciwane angasetshenziswa ezindaweni ezinzima kakhulu, ezingezona izigaxa, kufaka phakathi imishini yezingane, ifenisha, amafriji, ompompi, amasinki, izibambo zeminyango, indawo yekhishi nendawo yokugezela, ukuhlanza phansi, izindawo zokuxhumana nezingane nemikhiqizo ye-elekthronikhi, nsuku zonke kungakusebenzisa.
Idizayinelwe ubuchwepheshe bephakethe obuthuthukisiwe, ingakhiya umswakama ongaphezulu kunanini ngaphambili, ngakho-ke ama-wipe angahlala emanzi isikhathi eside. Kukhona amaphilisi ayi-10 kuphela ngephakethe ngalinye, okulungele ukuwakhipha noma ngasiphi isikhathi.
* Inkampani yethu
Sinefektri yethu eHangzhou, Zhejiang, China. IMIKHIQIZO ehlanzekile yokunikeza imindeni iminyaka engaphezu kwengama-80 yomlando wokuvikelwa, engasiza imindeni ukuthi imelane namagciwane futhi iwavikele ngemikhuba emihle yenhlanzeko. Imboni yethu ibuye isekele izinsizakalo ze-OEM ne-ODM. Phakathi kwezinkampani ezahlukahlukene zokuhweba, singabakhethi bakho abaphambili nomlingani webhizinisi othembekile ngokuphelele.
* Izinkombandlela Zokusetshenziswa
1. Khipha ifilimu evikelayo bese ukhipha izesuli ezimanzi.
2. Sicela uphinde ubeke uphawu emva kokusebenzisa ngakunye, bese ugcina ngekhava eceleni ukuze ugweme ukoma.
3. Sula indawo ukuze uhlanzeke, bese uphonsa izesuli emgqonyeni kadoti.
Ukupakisha okucwaningwayo - Qinisekisa ukuthi ukupakisha kungavulwa kabusha phakathi kokusetshenziswa ukuvimbela ukusula komhlaba ukuthi kungomi.
Ukusula okumanzi akusheshi, ungawaphonsi ngqo ethoyilethi.
* Olunye ulwazi
Gcina lapho izingane zingafinyeleli khona. Uma ugwinye ngengozi: Uma uzizwa ungaphathekile kahle, thintana nesikhungo sobuthi noma udokotela.
Uma kukhona ukungaphatheki kahle ngesikhathi sokusebenzisa, sicela uyeke ukukusebenzisa futhi ufune izeluleko kudokotela ngokushesha.
Langaphambilini Ifektri ye-OEM OEM 80 esula isikhwama ehluza ama-75% okusula utshwala
Olandelayo: I-70% Alcohol Instant Antibacterial Gel Hand Sanitizer ene -chain ngokwezifiso
Ama-Antiseptic Wet Wipes
Ama-Antibacterial Moist Wipes aqinisekisiwe
ukuhamba usula isinqandakuvunda
Ukuhlanza ngobumnene phansi amajekethi asula ngamanzi nge ...
Factory wholesale ulamula ukunambitheka magciwane ...
Ikheli: Cha. 908, Academician Road, Fenshui Town, Tonglu County, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Indwangu engalukiwe ngaphandle kokuluka
Unyaka ophambene womhlaba wonke ongalukanga ku ...
Izinto zokwakha sezikhuphuke kakhulu. Sizoshintsha ...
Ekhaya iphepha China futhi sanitar ...
Ungakhetha kanjani ama-baby wipes?
Ukuze ubambisane nomkhiqizi wakho omuhle, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana namahora angama-24.